Android မှာရရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ Google Podcasts App
21 Jun 2018 . 9:48 AM
FM Ratio လိုမျိုးပဲ Internet ကနေ Talkshow တွေ၊ Episodes တွေကို နားထောင်လို့ရတယ်ဆိုတာကို သင်သိပါသလား? အခုလိုမျိုး နားထောင်လို့ရတဲ့ Channel တွေကို Podcasts လို့ ခေါ်ဆိုပြီးတော့ ယခုအချိန်မှာ Google ကနေ Popcasts တွေအများအပြားကို တစ်စုတစည်းထဲနားထောင်နိုင်မယ့် Application တစ်ခုကို ကြေညာလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခု Application ကိုတော့ Google Podcasts လို့ နာမည်ပေးထားပြီးတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ Android မှာ အခမဲ့ Download ရယူနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း လောလောဆယ်မှာတော့ iOS မှာတော့ Download ပြုလုပ်လို့ မရသေးပါဘူး။
Google Podcasts App ကို ဝင်ရောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် အလွန်ရိုးရှင်းပြီးတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ Podcasts Channel ပေါင်း ၂ သန်းကျော်ကို နားဆင်နိုင်ပြီး Google ကပြောထားတာကတော့ လက်ရှိ ရှိသမျှ Podcasts Channel တွေအကုန်လုံးကို နားဆင်နိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခု Podcasts Channel တွေထဲက ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ Podcasts Channel ကိုလည်း Subscribed ပြုလုပ်ထားနိုင်ပြီးတော့ Subscribed ပြုလုပ်ထားတဲ့ Channel တွေတော့ Offline Playback ကိုပါရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်နားထောင်နေတဲ့ Podcasts တွေက Google Account နဲ့ Sync လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် တခြား Devices တွေကနေလည်း ဘယ်အချိန်မဆို ပြန်လည်နားဆင်နိုင်မှာပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခု Google ရဲ့ Podcasts App က Talkshow တွေ၊ Episodes တွေကို နားဆင်ရတာ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ အကောင်းဆုံး App တစ်ခုဖြစ်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
FM Ratio လိုမြိုးပဲ Internet ကနေ Talkshow တှေ၊ Episodes တှကေို နားထောငျလို့ရတယျဆိုတာကို သငျသိပါသလား? အခုလိုမြိုး နားထောငျလို့ရတဲ့ Channel တှကေို Podcasts လို့ ချေါဆိုပွီးတော့ ယခုအခြိနျမှာ Google ကနေ Popcasts တှအေမြားအပွားကို တဈစုတစညျးထဲနားထောငျနိုငျမယျ့ Application တဈခုကို ကွညောလိုကျပွီပဲဖွဈပါတယျ။
အခု Application ကိုတော့ Google Podcasts လို့ နာမညျပေးထားပွီးတော့ လကျရှိအခြိနျမှာ Android မှာ အခမဲ့ Download ရယူနိုငျနပွေီဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး လောလောဆယျမှာတော့ iOS မှာတော့ Download ပွုလုပျလို့ မရသေးပါဘူး။
Google Podcasts App ကို ဝငျရောကျလိုကျမယျဆိုရငျ အလှနျရိုးရှငျးပွီးတော့ လကျရှိအခြိနျမှာ Podcasts Channel ပေါငျး ၂ သနျးကြျောကို နားဆငျနိုငျပွီး Google ကပွောထားတာကတော့ လကျရှိ ရှိသမြှ Podcasts Channel တှအေကုနျလုံးကို နားဆငျနိုငျမယျလို့ သိရပါတယျ။
အခု Podcasts Channel တှထေဲက ကိုယျနှဈသကျတဲ့ Podcasts Channel ကိုလညျး Subscribed ပွုလုပျထားနိုငျပွီးတော့ Subscribed ပွုလုပျထားတဲ့ Channel တှတေော့ Offline Playback ကိုပါရရှိမှာဖွဈပါတယျ။ ကိုယျနားထောငျနတေဲ့ Podcasts တှကေ Google Account နဲ့ Sync လုပျထားတာဖွဈတဲ့အတှကျ တခွား Devices တှကေနလေညျး ဘယျအခြိနျမဆို ပွနျလညျနားဆငျနိုငျမှာပါ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ အခု Google ရဲ့ Podcasts App က Talkshow တှေ၊ Episodes တှကေို နားဆငျရတာ ကွိုကျနှဈသကျတဲ့သူတှအေတှကျတော့ အကောငျးဆုံး App တဈခုဖွဈလာပွီပဲဖွဈပါတယျ။